Ihe 7 ị ga - emerịrị na Amsterdam | Akụkọ Njem
Ihe 7 ị ga-emerịrị na Amsterdam
Maria José Roldan | | Amsterdam, Obodo
Ọtụtụ ndị chọrọ gaa Amsterdam na njem Ma ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ha, ọ ga-abụ na ị na-eche maka ụbọchị kachasị mma ịmalite njem gị. Ndị mmadụ na-eme njem na Amsterdam na-achọpụta na ọ bụ ebe magburu onwe ya ịga ọ bụghị naanị otu ugboro, kama ịmeghachi njem ahụ ihe karịrị otu ugboro na ugboro abụọ. Na mgbakwunye, n'ebe ahụ ị ga-enwekarị ihe ịchọpụta ma ọ bụrụ na ịmaghị ihe ị nwere ike ime ebe ahụ iji nwee anụrị, egbula oge ịga n'ihu na-agụ n'ihi na isiokwu a bụ maka gị.
Ọ bụrụ na ị gara Amsterdam, ị nwere ike ị gaghị akọwa n'otu okwu ihe ọ pụtara nye gị, n'ihi na ọ bụ nnukwu obodo Dutch ma eleghị anya ị cheworị ibi ebe ahụ. Ọ bụrụ na ị gaa Amsterdam, wee cheta isiokwu a n'ihi na m ga-agwa gị ụfọdụ ihe ị na-agaghị echezọ ịme, You'll ga-ahụ ya n'anya!
1 Mgbazinye igwe kwụ otu ebe ma jiri ya gaa
2 Nwee biya ma ndị mmadụ na-ekiri
3 Rie waffles
4 Gaa na mpaghara ọkụ ọkụ uhie
5 Echefula iji foto were leta "M Amsterdam"
6 Echefula kọfị kọfị
7 Gaa na Anne Frank House
Mgbazinye igwe kwụ otu ebe ma jiri ya gaa
Ọ bụrụ na ị bụghị onye ofufe nke ịnyịnya ígwè na Amsterdam ọ ga-adị ka ọ bụ, n'ezie ... ị ga-ahụ n'anya n'ịgba ịnyịnya ígwè. Enwere ọtụtụ narị puku igwe igwe n'okporo ụzọ na ndị mmadụ hụrụ ha n'anya. Chọta igwe ịgbazite agaghị abụ nsogbu n'ihi na ị ga-ahụ ọtụtụ igwe kwụ otu ebe na nso ebe ị nọ - n'agbanyeghị ebe ị nọ n'obodo ahụ. Mgbe e mesịrị, I ghaghi weghachi ya ka onye ozo wewere gi ya. Gba ịnyịnya ígwè dị mkpa maka ahụike gị yana maka gburugburu ebe obibi, yabụ… egbula oge ịgba ịnyịnya ígwè.
Nwee biya ma ndị mmadụ na-ekiri
Ihe dị mfe dịka ị aụ biya na ịlele ndị na-agafe na Amsterdam dị ezigbo mkpa ka ị wee nwee ike ịnụ ụtọ ekpomeekpo ahụ na obodo ahụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị onye hụrụ biya n'anya, m na-adụ gị ọdụ ịnwe mmetụta a Na obodo Dutch, nke nwere nnukwu biya ma na-atọ ụtọ, dịka ọmụmaatụ, enwere isi ụlọ ọrụ Heineken International.
Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị nweghị mmasị biya biya ma ọlị, mgbe ahụ ị nwere ike ịhọrọ ịga kọlọfetị wee nwee ezigbo kọfị, mana n'otu oge ahụ ka ị na-agụ akwụkwọ ị nwere ike ịlele ndị mmadụ. Senọ ọdụ n'èzí bụ ihe kacha mma maka ịchọta izu ike na ndị mmadụ na-ele oche gị.
Ọ bụrụ na enwere ihe ị ga - echezọ ịme na Amsterdam - ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ụtọ - ọ bụ iri waffle na - atọ ụtọ. Mgbe ị na-agagharị n’obodo ahụ, ọ ga - ekwe omume na site n’oge ruo n’oge ị nwere ike ịnụ ísì ụtọ nke ihe ụtọ ...
Waffles na-ewu ewu na Amsterdam niile ma nwee ọdịiche dị iche iche ya mere ị nwere ike ịnụ ụtọ nke kachasị amasị gị. Caramel na sirop bụ ihe ndị pụrụ iche. Ma ndị kasị ewu ewu bụ strawberry ma ọ bụ nutella waffles, incredibly delicious!
Gaa na mpaghara ọkụ ọkụ uhie
Ekwenyesiri m ike na ị nụtụla gbasara mpaghara ọkụ ọkụ Red na ị kwesịrị ịma na ihe niile ị nụrụ ugbu a bụ eziokwu. E nwere ọtụtụ ọkụ na-acha uhie uhie n’ebe niile ma nwekwaa ụmụ nwanyị na windo iji dọta ndị mmadụ n’ebe ha nọ. -ma nwee mmekorita nke ugwo-. Yabụ ee, ihe niile ị nụrụ bụ eziokwu.
Mana ọ bụrụ na ị na-achọ atụmatụ na ihe a ga-eme na Amsterdam Ọ bara uru ịgagharị na mpaghara a iji chọpụta na akụkọ niile ị nụrụ banyere ụmụ nwanyị na ọkụ ọkụ bụ eziokwu.
Echefula iji foto were leta "M Amsterdam"
Akwụkwọ ozi ndị a dị na Rijksmuseum ma na-anọchite nkwupụta nke nsonye maka ndị niile bi n'obodo ahụ, n'agbanyeghị onye ha bụ ma ọ bụ ebe ha si. Ọ bụ nnabata mmadụ niile, ebe ndidi bụ ihe kachasị na obodo. Ga-achọpụta na ọ na-ejuputa na ndị mmadụ n'ihi na ndị mmadụ chọrọ ịse foto yana hụkwa leta niile, ọ dịka akara nke njikọta n'etiti mmadụ niile.
Echefula kọfị kọfị
Ọ bụrụ n ’ị na-eche echiche ịga Starbuck maka kọfị, a na m adụ gị ọdụ ka ị chee echiche ugboro abụọ mgbe ị nọ na Amsterdam. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-anụ ụtọ obodo a n'ihi na A maara Amsterdam maka nkwado iwu nke ọgwụ 'dị nro' dị ka wii wii na ọtụtụ ụlọ ahịa kọfị na-ekwe ka ojiji ya kemgbe 1970.
Enwere gburugburu Coffeeshops 200 gbasasiri gburugburu Amsterdam. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ụdị ebe a, ị nwekwara ike ịnwe mmasị na Cannabis Cup na Amsterdam. Ọ bụ ihe omume na-egosi ụdị wii wii dị iche iche na e nwere ndị ikpe na-ahọrọ ndị kasị mma. Agbanyeghị na mmemme a abụghị naanị Amsterdam, ebe ọ bụ na a na-eme ya na ndịda California, Denver, San Francisco na Portland.
Gaa na Anne Frank House
Ọ bụ ihe dị mma mgbe niile ịtụgharị uche na arụrụala ahụ emere megide ndị Juu n'oge Agha IIwa nke Abụọ n'ụlọ Prinsengracht, ebe onye na-ede akwụkwọ Anne Frank na ezinụlọ ya zoro ndị Nazi afọ abụọ mgbe ha nwesịrị mkpagbu na Germany. N'ihu ụlọ ahụ bụ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na-akpali iche echiche. A na-enwekarị ọtụtụ kwụ n’ahịrị n’ihi na e nwere ọtụtụ ndị nwere mmasị ịmara akụkọ ihe mere eme. Ọ bụ ya mere m ji adụ gị ọdụ ka ị gaa n'isi ụtụtụ ma ọ bụ dobe tiketi gị n'ịntanetị.
Ndị a bụ 7 n'ime ihe ị na-ekwesịghị ichefu ịme na Amsterdam, mana n'ezie, enwere ọtụtụ ihe, dịka ịgagharị ọwa mmiri ... ọ bụkwa obodo jupụtara na ohere ọ bụla ga - enyere gị aka ịchọpụta ọmarịcha ihe ebe, ya na ndi mmadu di ebube na ndi nwere otutu nkuku ka inwe obi uto na ichoputa ima nma nke obodo, ebe anabatara onye obula na ndidi na-aputa ihe n'okporo ámá ya. You maraworị mgbe njem gị gaa ọmarịcha obodo a ga-abụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Ihe 7 ị ga-emerịrị na Amsterdam
Kporie ndụ Vienna n'ime ụbọchị atọ
5 Ihe Osimiri N’okpuru Mmiri Gbasara Gburugburu Worldwa